तुलनामा अमेरिका र उत्तर कोरियाको ताकत ? | Emedia Hub UK
Home News तुलनामा अमेरिका र उत्तर कोरियाको ताकत ?
उत्तर कोरियामाथि विभिन्न प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लगाइसकिएको छ । यति हुँदा हुँदै पनि उत्तर कोरिया आफ्नो ताकत बढाउन प्रयासरत छ । अहिले उत्तर कोरिया र अमेरिकाबिचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
एकातर्फ अमेरिका किम जोंग उनमाथि लगाम लगाउने कोसिस गरिरहेको छ भने दोस्रोतर्फ उत्तर कोरिया प्रतिबन्धलाई मान्ने पक्षमा छैन जसका कारण यसले विभिन्न समयमा हमलाको धम्की दिइरहेको छ ।
१८ अक्टोबरमा उत्तर कोरियाले परमाणुयुक्त मिसाइल परिक्षण गर्ने बताइएको छ । अब उत्तर कोरिया अमेरिकाका लागि टाउको दुखाई बनिसकेको छ । आउनुहोस् अमेरिका र उत्तर कोरियाको सैन्य ताकत कति छ, यसबारे जानकारी लिऔं ।
उत्तर कोरियासँग कूल १ करोड ३० लाख सैनिक छन् । उता अमेरिकासँग १४ करोड ५२ लाख सैनिक छन् ।
मिलिट्री सेटेलाइटमा अमेरिका यति शक्तिशाली छ कि यदि उत्तर कोरियामा एउटा चरा उडेको देखिएपनि अमेरिकी सेटेलाइट त्यसमाथि ड्रोन हमला गर्न सक्छ । अमेरिकासँग कूल १ सय २३ मिलिट्री सेटेलाइट छ जबकी उत्तर कोरियासँग एउटा पनि छैन ।
उत्तर कोरियाको विषयमा अमेरिका अब सतर्क भएको छ र दक्षिण कोरिया र जापानसँग मिलेर सैन्य अभ्यास पनि जारी छ ।
उत्तर कोरियासँग १०० अट्याक हेलिकोप्टर छ जबकी अमेरिकी सेनासँग १ हजार ८ सय ३० अट्याक हेलिकोप्टर छन् ।
उत्तर कोरियासँग ७६ सबमरिन छ भने अमेरिकासँग ८१ अर्थात् यसमा पनि अमेरिका निकै अगाडि छ । अमेरिकासँग न्यूक्लियर सबमरिन पनि छ जबकी उत्तर कोरियासँग छैन ।
उत्तर कोरियासँग १० वा त्योभन्दा थोरै बढि न्यूक्लियर बम छ भने अमेरिकासँग ७ हजारभन्दा बढि छन् ।
उत्तर कोरियासँग कूल ९ सय ४४ एयरक्राफ्ट छन् । त्यस्तै अमेरिकासँग त्योभन्दा १५ गुणा बढि (१३ हजार ७ सय ६२) एयरक्राफ्ट छन् ।
उत्तर कोरियासँग जहाँ ५ हजार २५ ट्याङ्क छन् भने अमेरिकासँग ५ हजार ८ सय ८४ ट्याङ्क छन् ।
यस्तै, उत्तर कोरियासँग १ सय ३० जंगी जहाज छन् भने अमेरिकासँग ४ सय ४१ जेंगी जहाज छन् जुन निकै आधुनिक छन् ।
१० अक्टोबरमा अमेरिकी मिलिट्री बम्बर्सले उत्तर कोरियाको पेनिसुला इलाकामाथि बाट उडान भरेको थियो । अमेरिकाले आफ्नो ताकत देखाउने कोसिस गरेको थियो ।
सैनिक ताकतको मात्र कुरा गर्ने हो भने अमेरिका उत्तर कोरियाभन्दा निकै अगाडि छ । युद्धका बेला त उत्तर कोरिया अमेरिकाको अगाडि सायद एक दिन पनि टिक्न नसक्ला भन्ने विशेषज्ञको अनुमान छ ।
यद्यपी, अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टिलरसनले पहिलो बम खसालेपछि पनि अमेरिका उत्तर कोरियासँग राजनयिक प्रयास जारी राख्ने बताएका छन् ।
सुचीमा हेर्नुस्: चार वर्षमा चार सरकार, एक सय ७८ मन्त्री !
संजय दत्तकी छोरी बोल्ड अवतारमा: यस्तो छ उनको ड्रिम